जनमत संग्रह मिलनबन्दु - Dainik Nepal
जनमत संग्रह मिलनबन्दु
दैनिक नेपाल २०७३ पुष १२ गते १०:२०
एउटै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका तर ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि अलग–अलग सैद्धान्तिक धारमा धुब्रीकृत हुन पुगेका राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरण सम्पन्न भएको छ ।
यो एकीकरण आगामी फागुन ६, ७, ८ र ९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न हुने ऐतिहासिक महाधिवेशन पछि मात्र संस्थागत हुनेछ । २०७३ मंसिर ६ गते भएको एकीकरणको घोषणा र फागुनमा हुने महाधिवेशनवीचको समय संक्रमण काललाई राप्रपाका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताहरुले सन्तुलित र संयमित रुपमा समायोजन एवं व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
यति बेला परस्परका अडानलाई त्यागेर एक अर्काको आर्दश, मान्यता र संवेदनशीलतालाई सम्मान र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । महाधिवेशन पछि राप्रपाको नेतृत्व कसले गर्दैछ ? लगभग त्यो निश्चित देखिएको छ । यसबारे थप अनुमान र विश्लेषण गर्नु अहिले हतार हुनेछ ।
एकीकृत राप्रपामा दुवै तर्फका नेता, कार्यकर्ताहरुको आफ्नो स्थान र भविष्य सुनिश्चित रहनुपर्दछ । यसो भएमा मात्र आगामी स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनहरुमा राप्रपा सशक्त र प्रभावकारी रुपमा जनतामाझ स्थापित भई मुलुकको निर्णायक राजनीतिक शक्ति बन्न सफल हुनेछ ।
०६२/०६३ को आन्दोलनपछि राप्रपाले राजसंस्था स्वीकार गरेको थिएन भने राप्रपा नेपालले गणतन्त्र स्विकार गरेको थिएन । यो फरक सैद्धान्तिक धरातललाई समायोजन र व्यवस्थापन आगामी महाधिवेशनले अत्यन्त गम्भीरताका साथ परिपक्व ढंगले गनु जरुरी छ ।
पार्टी एकीकरणलाई जगैदेखि सैद्धान्तिक रुपमा नै संस्थागत र मजबुत बनाउने हो भने नमिलेका मुद्दाहरुमा जनमत संग्रह माग गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । राप्रपा एकिकरण सम्बन्धी निीतगत आधारका गणतन्त्र वा राजसंस्था सम्बन्धी बुँदा नं ४ लाई निराकरण गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७५ बमोजिम यो मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा लिएर जनमत संग्रहबाट यसको संवैधानिक निकास र निरुपण खोज्दै अगाडी बढ्न सकिन्छ ।
जनमत संग्रह नै दुवै तर्फको सम्मानजनक मिलनबिन्दु भएको हुँदा यसमा नै राप्रपाका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुको अवस्था सम्मानजनक रहन सक्दछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मुलुकको अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बन्न बाट कसैले रोक्न सक्दैन ।
(- लेखक पत्रकार एवं राप्रपा स. प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।)